Semalt: အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် malware ကာကွယ်ခြင်းအတွက်တန်ဖိုးရှိသောနည်းလမ်းများ
သင်ဟာလူမှုရေးအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်လား အကယ်၍ သင်သာဖြစ်ပါကအသေးစားစီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းသည်သင်၏အကူအညီအတွက်ငိုနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်? Symantec မှရရှိသောကိန်းဂဏန်းများအရဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအားလုံး၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၀ န်ထမ်း ၅၀၀ အောက်သာရှိသောကုမ္ပဏီများအပေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ပိုမိုဆိုးရွားလာအောင် National Cyber Security Alliance ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ် ၅ ခုလျှင် ၁ ခုသည်ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်နှစ်စဉ်ရင်ဆိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနံပါတ်၏ ၆၀% သည်ပြန်လည်မထွန်းကားပါ။ သူတို့သည်ခြောက်လမျှအကြာတွင်ဆိုင်ပိတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများတောင်းခံရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များကိုသင်ရှာဖွေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနိူင်ပုံကို လေ့လာရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ ။ ထို့နောက် Semalt ၏ Customer Success Manager Oliver King မှသတ်မှတ်ထားသောလမ်းညွှန်ကိုအသုံးပြုပါ (malware) ။
Malware ဆိုသည်မှာအန္တရာယ်ရှိသော software အတွက်အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ တိုက်ဆိုင်စွာပြောရလျှင် 'mal' ရှေ့ဆက်သည်စပိန်နှင့်အခြားလက်တင်ဘာသာစကားများတွင်မကောင်းသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာဆိုးသည်) ။ သင်နားလည်ရန်အဓိပ္ပာယ်အချို့ကိုဒီမှာဖော်ပြထားသည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အမှန်တကယ်တွင်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲသင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲသင်၏ system ထဲတွင်သူ့ဟာသူ install လုပ်သောမည်သည့် software ကိုမဆိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပြုသောယေဘုယျအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်စသည်တို့ကိုခိုးယူရန်အသုံးပြုသည့်အချက်အလက်များကို phish လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ransomware နှင့် spyware အားလုံး။
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသင်ဖတ်ရှုသည့်ရောဂါပိုးများကဲ့သို့ပင်ဗိုင်းရပ်စ်များသည်မိမိကိုယ်မိမိပုံတူကူး။ အခြား disk အပိုင်းအစများ (သို့) registry ဖိုင်များသို့ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကွန်ပျူတာစနစ်များကို overwrite၊ delete သို့မဟုတ် reformat လုပ်ရန်အစီအစဉ်ချထားသည်။
နာမည်ကဖော်ပြသလိုပဲ၊ အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းပေါ်ကလုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထောက်လှမ်းရန်စပိုင်ဝဲများကိုပေးပို့သည်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များ၊ browser သမိုင်းနှင့် cookies များကိုမကြာခဏစိတ်ဝင်စားမှုရှိသူများထံရောင်းချခြင်းဖြင့်သင်၏ privacy ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအကြောင်းပြောနေသည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင် spyware သည်သင်၏ login အသေးစိတ်နှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသော့ခတ်ခြင်းဖြင့်ခိုးယူနိုင်သည်
ဤသည်မှာရှုပ်ထွေးသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးဓားစာခံကိုကိုင်ဆောင်ရန်ဟက်ကာများအသုံးပြုကြသည်။ သူတို့ကဒေတာဘေ့စ်သို့မဟုတ်ဆာဗာကိုထိန်းချုပ်ပြီးအရင်းအမြစ်ကိုလွှတ်ပေးရန်ငွေပေးချေမှုကိုတောင်းဆိုကြသည်။ CryptoLocker သည် ransomware ၏အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 2013 ခုနှစ်လွှတ်ခဲ့သည်
သင်၏လုပ်ငန်းကို malware မှကာကွယ်ခြင်း
သင်၏စီးပွားရေးကို malware များ၏အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်အတွက်အောက်ပါတို့ကိုလေ့လာပါ။
၁။ သင်၏ PC များ antivirus ကို update လုပ်ပါ။ သေချာတာပေါ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်ကို install လုပ်ရမယ်ဆိုတာမဖြစ်မနေလုပ်ရမှာဖြစ်ပေမယ့်ဒီပရိုဂရမ်ကနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းလား။ ဒီဟာကနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါသလား။ ၄ င်းတွင် anti-malware feature ရှိသလား။
၂. စစ်မှန်သော operating system၊ legit programs နှင့် firmware ကိုသုံးပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အက်ပ်များကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ထောင့်ဖြတ်များကိုမဖြတ်ပါနှင့်။ စစ်မှန်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုဝယ်ယူပါသို့မဟုတ်ရယူပါ။ Firewall တခုခုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
၃။ စကားဝှက်မူဝါဒကိုဖန်တီးပြီးပြဌာန်းပါ။ စကားဝှက်မန်နေဂျာများကိုစမ်းကြည့်ပါ (သို့) alpha နံပါတ်များနှင့်အထူးအက္ခရာများဖြင့်ခက်ခဲသောခန့်မှန်းစကားဝှက်များကိုစတင်အသုံးပြုပါ။
၄။ အခွင့်အလမ်းမယူပါနှင့်။ စိတ်ဓာတ်မကျမိစေရန် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အနေဖြင့်နောက်ဆုတ်သွားလျှင်သို့မဟုတ်ဆန္ဒအလျောက်ထွက်သွားတိုင်းကွန်ယက်ကိုပြောင်းပါ။ ဤနည်းဖြင့်မကျေမနပ်ဖြစ်နေသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကသင့်အားရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်စေရ။
၅။ ၀ န်ထမ်းများကိုပညာပေးပါ။ သံသယဖြစ်ဖွယ်လင့်ခ်များနှင့်ပူးတွဲဖိုင်များကိုသူတို့မနှိပ်မိစေရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်သေချာပါစေ။ သူတို့ကို download လုပ်ထားသော program များအားလုံးကို antivirus program တစ်ခုဖြင့် run ပါစေ။